Isetyenziselwa iSilinda seHydraulic
Isilinda esihamba ngesanti kubunzulu baphantsi ngokubanzi ibhekisa kwisilinda esisixhobo esifanelekileyo. Isilinda hydraulic luhlobo lwe hydraulic actuator esiguqula amandla e-hydraulic ukuba abe ngamandla oomatshini kwaye yenze intshukumo yomgama wekhompawundi (okanye iswitch motion). Ilula kubume kwaye ithembekile ekusebenzeni. Nini ...
Uyenza njani iCustomer Hydraulic Cylinder
Isilinda hydraulic, enyanisweni, yinxalenye yezixhobo zoomatshini. Kuya kufuneka ihlangabezane neemfuno zokuqhutywa, ukubetha, indawo yokufaka kunye nobungakanani bokufakwa kwesixhobo sonke. Ulwakhiwo olukhethekileyo lomatshini wolwakhiwo, umda wesilinda ungqongqo kakhulu. Emva k ...
Uyigcina njani iSilinda yeHydraulic
Yenza umsebenzi olungileyo ekucoceni, ufuna ukwenza umsebenzi olungileyo kulondolozo lwe-hydraulic silinda, emva koko kufuneka wenze umsebenzi olungileyo wokucoca. Lo ngumcimbi obaluleke kakhulu, isilinda esisebenza ngamanzi kwinkqubo yexesha elide iya kuvelisa uthuli oluninzi kunye namabala, ukuba ayicocwanga ngexesha, iya kuba ...